Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanotorana tany : Fantaro ireo nahavanon-doza
Vokatrin’ny fanotorana tany ny lemaka sy ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina azy tsy ara-dalàna izao fisian’ny tondra-drano nitarika faty olona sy faharavana trano ary fahasimban-dàlana izao. Zovy tany zovin-danitra ka orana avy iray andro sy iray alina ihany, dia nitarika loza teo Antananarivo.
Ny tompon’andraikitra tao amin’ny kaominina sy ny ministeran’ny fanajariana ny tany ireto no isan’ny olona nahatonga izao loza izao. Nanomboka tamin’ny taona 2001 naha ben’ny tanàna an’Antananarivo an’i Patrick Ramiaramanana no nanomboka ity raharaha tsy voahevitra ity. Nodimbiasan’ingahy PDS Edgard Razafindravaha koa izany tamin’ny andron’ny tetezamita, izay nampiany Lalao Ravalomanana ny taona 2013, ary ireto minisitrin’ny fanajariana ny tany ireto: Herivelona Ramanantsoa, Reboza Julien, Rivo Rakotovao ary Razanamahasoa Christine taty aoriana. Ireo no isan’ny olona mpanome alalana amin’ny fanotorana tany teto Antananarivo. Fanotorana tany tsy nanaraka ny fenitra tokony ho izy no nataon’izy ireo raha nozohiana ny tantara. Izy ireo no isan’ny mpanampa-kevitra nanome fahefana ireo mpanototra tany tamin’izany fotoana izany ka nahatonga ny fahasimbana izao. Misy koa teknisianina ao amin’ny kaominina sy ministeran’ny fanajariana maro no voatonontonona amin’ity raharaha ity. Hatramin’ireo be ny fokontany dia tafiditra amin’ity amin’izany koa.
Eo anatrehan’ny zava-misy ankehitriny dia sahirana ingahy Naina Andriantsitohaina izay ben’ny tanàna ankehitriny. Any aminy no amaharan’ny olona. Mila fanazavana sy tokony horesahina. Ny tantara tsy mba fanadino.